Izilondolozi Eziqinile zeMiller - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
INkantolo Ephakeme yaseCalifornia iphika ukubuyekezwa kokulahleka kwecala leMonsanto Roundup
Posted on October 22, 2020 by UCarey Gillam
INkantolo Ephakeme yaseCalifornia ayizukubuyekeza ukunqoba kwecala lowesilisa waseCalifornia elanqoba iMonsanto, laphinde lahlasela umnikazi waseMonsanto waseGerman, uBayer AG.
The isinqumo sokwenqaba ukubuyekezwa ecaleni likaDewayne “Lee” Johnson umaka okwakamuva ochungechungeni lokulahlekelwa yinkantolo ngenxa Bayer njengoba izama ukuqeda izindawo zokuhlala nabamangali ababalelwa ku-100,000 XNUMX abathi ngamunye noma abathandekayo bakhe bathuthukisa i-non-Hodgkin lymphoma kusukela ekuchayekeni kwe-Roundup nabanye ababulali bokhula baseMonsanto. Amajaji ekuhlolweni ngakunye kwezintathu okubanjwe kuze kube manje awatholanga lokho kuphela kwenkampani ukhula lwe-glyphosate-based kubangela umdlavuza kepha nokuthi uMonsanto uchithe amashumi eminyaka efihla izingozi.
“Sidumele ngesinqumo seNkantolo sokungabuyekezi isinqumo senkantolo yokudlulisa enkantolo ephakathi Johnson sizobheka nezinqumo zethu zomthetho ukuze siqhubeke nokubuyekeza leli cala, ”kusho uBayer esitatimendeni.
Inkampani kaMiller, Inkampani yabameli bakaJohnson eseVirginia, ithe isinqumo seNkantolo Ephakeme yaseCalifornia siphikile “umzamo kaMonsanto wakamuva wokweqa umthwalo” ngokudala umdlavuza kaJohnson.
“Amajaji amaningi manje asekuqinisekisile ukuvumelana ngazwi linye kwejaji ukuthi iMonsanto ifihle ngenhloso ingozi yomdlavuza kaRoundup futhi yabangela uMnu. Johnson ukuba abe nomdlavuza obulalayo. Isikhathi sesifikile sokuthi iMonsanto iqede izicelo zayo ezingenasisekelo futhi ikhokhele uMnu Johnson imali emukweleta yona, ”kusho le nkampani.
Ijaji elavumelana ngazwi linye elatholakala ngo-Agasti 2018 lokuthi ukuvezwa kwemithi yokubulala ukhula kaMonsanto kwabangela ukuthi uJohnson athuthukise uhlobo olubulalayo lwe-non-Hodgkin lymphoma. Ijaji labuye lathola ukuthi iMonsanto yenza ukufihla ubungozi bemikhiqizo yayo ngokuziphatha ngendlela emangazayo kangangokuba inkampani kufanele ikhokhele uJohnson $ 250 million ngokulimala kokujezisa ngaphezu kuka- $ 39 wezigidi kumonakalo odlule nowesikhathi esizayo.
Ngemuva kokudluliswa kwesinqumo esivela eMonsanto, ijaji lecala lanciphisa imali eyizigidi ezingama- $ 289 kuya ku- $ 78 million. Inkantolo yokudlulisa amacala ibe isinqamula lo mklomelo waba ngu- $ 20.5 million, icaphuna iqiniso lokuthi uJohnson kwakulindeleke ukuthi aphile isikhashana nje.
Inkantolo yokudlulisa amacala ithe yehlise indondo yomonakalo ngaphandle kokuthola kwakukhona ubufakazi "obuningi" bokuthi i-glyphosate, kanye nezinye izithako emikhiqizweni yakwaRoundup, yabangela umdlavuza kaJohnson nokuthi "kwakukhona ubufakazi obuqand 'ikhanda bokuthi uJohnson wahlupheka, futhi usazoqhubeka nokuhlupheka impilo yakhe yonke, ubuhlungu obukhulu nokuhlupheka. ”
Bobabili uMonsanto noJohnson bafuna ukubuyekezwa yiNkantolo Ephakeme yaseCalifornia, uJohnson ecela ukubuyiselwa umklomelo omkhulu wokulimala kanti uMonsanto ufuna ukuguqula isinqumo senkantolo.
IBayer ifinyelele ezindaweni zokuhlala nezinkampani ezimbalwa ezihola phambili zabameli ezimele isabelo esikhulu sezimangalo ezilethwe iMonsanto. NgoJuni, iBayer yathi izonikeza u- $ 8.8 billion kuya ku- $ 9.6 billion ukuxazulula icala.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker #Rounduptrial, Bayer, California, umdlavuza, izinkantolo, izifo, imvelo, EPA, Ukudla, glyphosate, zezempilo, Lee Johnson, icala, Monsanto, i-non-Hodgin lymphoma, i-non-Hodgkin's lymphoma, IRanger Pro Roundup, RoundUp, Izilingo zomdlavuza we-RoundUp, I-Roundup isilungile, isayensi, IMiller Firm
Ijaji laseMelika lifuna iMonsanto neBayer ukuthi baqale izingxoxo zokuxazulula izinkinga zomdlavuza weRoundup
Posted on April 4, 2019 by UCarey Gillam
IJaji Lesifunda sase-US uVince Chhabria ucela uMonsanto nomnikazi wayo omusha uBayer AG ukuthi baqale ukuxoxisana nabameli bezisulu zomdlavuza abamangalele uMonsanto bethi i-Roundup yayo kanye namanye ama-herbicides asuselwa e-glyphosate enza i-non-Hodgkin lymphoma.
Isinyathelo sikaChhabria siza ngemuva komklomelo wamajaji ayi- $ 80 million wabanxephezeli u-Edwin Hardeman ngenyanga edlule enkantolo yakhe. Futhi ngummangali wehlobo eledlule uDewayne “Lee” Johnson wanikezwa amaRandi ayizigidi ezingama-289 ngamajaji enkantolo yezwe, yize ijaji kulelo cala lehlisa umonakalo laya ezigidini ezingama-78 zamaRandi.
U-Chhabria wayexwayise ngokuthi angahle athathe isinyathelo esinjalo, kodwa waveza nokuthi uzolinda kuze kuphothulwe ukuqulwa kwamacala amathathu ngaphambi kokufuna isivumelwano. Isivivinyo sesithathu somdlavuza seRoundup sisanda kuqhubeka, noma kunjalo.
Njengoba ecindezela amaqembu ukuthi axazulule, uChabbria ushiye usuku lokuqulwa kwecala lwangoMeyi 20 obelubekelwe ukuqulwa kwecala likahulumeni elilandelayo. Leli cala, UStevick v. Monsanto yafakwa ngo-Ephreli 2016 ngu-Elaine Stevick, one-non-Hodgkin lymphoma, nomyeni wakhe uChristopher Stevick. Lezi zithandani bezihambele izingxenye ezithile zecala likaHardeman.
Abamangali ababalelwa ku-11,000 bamangalele iMonsanto, eyathengwa yiBayer ehlobo eledlule. Ngaphezu kwalezi zinsolo ezingama-800 zibhekwe yiChabria njengezimbangi zamazwe amaningi. Kusalindwe izinkulungwane ezimbalwa ezinkantolo zombuso ezweni lonke.
Izingqapheli ziye zacabanga ukuthi ukukhokhelwa komhlaba wonke kungasebenza phakathi kwama- $ 3 billion kuya ku- $ 5 billion.
IBayer inananise nesimo seMonsanto sokuma isikhathi eside sokuthi i-Roundup namanye ama-herbicides asuselwa eglyphosate ngaphakathi kwephothifoliyo yezinkampani aphephile futhi awubangeli umdlavuza. Kepha abatshalizimali eBayer bebelokhu bexaka isitoko senkampani futhi egxeka isikhulu esiphezulu seBayer uWerner Baumann ngokukhokha amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 63 ngeMonsanto kuphela ukuze ube nesibopho sezikweletu zamacala amakhulu. Abanye banxenxa ivoti lokungamethembi uBaumann emhlanganweni wonyaka wenkampani ohlelelwe u-Ephreli 26. Amasheya enkampani alahlekelwe cishe ngamaphesenti angama-40 ngenani - cishe ama- $ 39 billion - selokhu kwaqulwa icala likaJohnson ehlobo eledlule.
Khonamanjalo, bekukhona izinhlansi zakuqala ezindiza ecaleni lomdlavuza iRoundup eliqhubeka manje eNkantolo Ephakeme yase-Alameda County. Uma kunjalo, umbhangqwana oshadile u-Alva no-Alberta Pilliod bobabili bane-non-Hodgkin lymphoma abasola ukuthi ibangelwe ukusetshenziswa kwabo okuvamile kwemithi yokubulala ukhula kaMonsanto.
Ummeli wabamangali uMike Miller ucele iJaji uWinifred Smith ukuthi khipha i-oda lokuvimbela lesikhashana ngokumelene neMonsanto ngokukhangisa okunzima inkampani ebikwenza ukuvikela ukuphepha kwemithi yokubulala ukhula yayo, kufaka phakathi isikhangiso esigcwele ikhasi kuWall Street Journal ngoMashi 25, usuku lapho i-voir dire yokukhetha amajaji ecaleni likaPilliod yaqala khona.
IMonsanto iphikisiwe ngokukhomba ukuthi abameli babamangali bebelokhu beqhuba izikhangiso zabo eziningi befuna amaklayenti amasha ecaleni leRoundup. Lesi siphakamiso sizoba "ukuhleleka okungahambisani nomthethosisekelo" futhi "siconsa ubuzenzisi," kusho abameli beMonsanto.
Ngokuphikisana nomyalelo, abameli bakaMonsanto batshele ijaji ukuthi iMiller Firm, emele amaPilliods nabanye abamangali abaningi, babe nesikhangiso eSan Francisco Chronicle bethi “ukuphindeka kabili noma kathathu” kwengozi yokungabi yiHodgkin lymphoma Ukuvezwa kwe-Roundup ezinsukwini eziyisikhombisa nje ngaphambi kokuqala kwecala likaPilliod. UMonsanto uthe kube nezikhangiso ezingama-2,187 ezilwa ne-Roundup zethelevishini nezomsakazo kusuka ngoDisemba 1, 2018 kuya kuMashi 21, 2019 ”emakethe yezindaba yaseSan Francisco.
IJaji uSmith lithole impikiswano kaMonsanto ikholisa futhi usiphikile isicelo sabamangali umkhawulo ekukhangiseni.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker UChristopher Stevick, U-Elaine Stevick, Mike Miller, IMiller Firm, UWerner Baumann, UWinifred Smith